पत्याउनै गार्हो यस्तो पनि हुन्छ ! बमजन आश्रममा आकाशमा उड्न सक्ने घोडा ; सिन्धुली आश्रममा जे देखियो (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
पत्याउनै गार्हो यस्तो पनि हुन्छ ! बमजन आश्रममा आकाशमा उड्न सक्ने घोडा ; सिन्धुली आश्रममा जे देखियो (भिडियो)
लिटिल बुद्धकाे नामले प्रख्यात रामबहादुरू बम्जन अहिले नराम्री बिवादमा मुछिएका छन । उनलाइ उनकै अनुयायिहरूकाे बलत्कार, बेपत्ता पार्ने जस्ता अभियाेग लाग्दै आएको छ। शो कुराको रहस्य पत्ता लगाउन प्रहरी पनि लागि परेको छ। प्रहरीले सिन्धुलीमा रहेको बमजनको आश्रममा रहेका स्वदेशी र विदेशी अनुयायीको परिचय खुल्ने कागजपत्रमा अनुसन्धान गरीरहेको छ ।
अहिले समाचार माध्यम, प्रहरी र जनताको नजर बमजन र उनी बस्ने आश्रमतर्फ बढिरहेको छ। यस विवादको जरासम्म पुग्नको लागि निरन्तर मिडियाहरु लागि परिरहेका छन्। हालै बमजनसँग जोडिएका धेरै कुराहरु मिडियामार्फत एक पछि अर्को गर्दै आइरहेको छ। यसैक्रममा बमजनको सिन्धुलीमा अवस्थित आश्रममा एक अनौठो घोडा रहेको चर्चा बाहिरिएको छ। उक्त घोडा बमजनले मात्रै चढ्ने गर्छन। सेतो आर्कषक देखिने यस घोडाले अरुलाई नचडाउने घोडालाई स्याहार गर्ने व्यक्तिको दावी छ।
त्यस घोडा बम्जनका भारतमा बस्ने भक्तले उतैबाट उपहार स्वरूप ल्याईदिएका हुन्। कसैले त यो घोडामा बमजन सवार भएर आकाशमा उड्ने गरेको पनि भनेका छन् जुन सत्य हो या ठ्माउ हैन ठम्याउन गाह्रो छ।
बमजनका त्यस आश्रमको वरपर कुनै घर छैनन्। पहिला १३ ओटा घर भएको र हालसबै बसाईसराई गररे गएको बमजनका एकअनुयायीले बताए। उनको अनुसार त्यहाँ बस्ने पहिलाका स्थानीय वासिन्दाले बमजनलाई स्वइच्क्षा बचेको र कति भक्तले त जग्गा नै गुरुलाई चढाए। यति धेरै सम्पति भएर पनि एक सानो छाप्रोमा बसेको देख्दा भक्तहरुको मन रोएको कारण रकम संकलन गरेर ८७ लाखको बस्ने भवन बनाइदिएको मणि लामाले बताए।